UBhejana we-Afrika - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Ezi zilwanyana ziyabonakala ngokulula ngempawu zabo zangaphambili kunye neempondo kwibunzini zabo. Ubhejane unesibindi kwaye zibonwe zidlile ngqo kwiiNgonyama, kunye neengonyama zingenakulinganiswa. Abangcibi banembopheleleko enkulu yokunciphisa i-Rhino. Kwi-Kruger National Park I-White Rhino (i-Ceratotherium simum) ivela kwiindawo ezinqabileyo phakathi kweSabie kunye neRocco Rivers, kwaye ngaphantsi kwe-Shingenyanga ne-Letaba. I-Black Rhino (Diceros bicornis) ifumaneka kwi hlathi elincinci kwinqanaba laseKruger phakathi kweSkukuza kunye ne-Pretoriuskop kunye nakumzantsi we Sabie kufuphi neCross Bridge.
iRhino zilala njani, kwaye zilala nini na?
iRhino ilala imile okanye ilale phantsi kwaye kungagqitha kwiiyure ezili bhozo ngosuku ngexesha. Banokulala ngaphantsi komthi xa kushushuhu, kodwa xa zithabatha ubuthongo obunzima, zilala kunye neenyawo zazo zijikeleze kancinane ecaleni elinye. Zilala kakhulu kwaye zifikeleka kalula.
IRhino ihlala izipholisa njani?
Ngethuba lobushushu komhla, iiRhino iya kuphumla emthunzini okanye ifune udaka. Udaka alupholisi nje kodwa lukhusela ulusu malunga nezinambuzana nelanga. iiRhino aqhele ekujikeleza ngakumbi ebusuku ngelixa kupholile kwaye lithwala kakhulu. Ziya kusela amanzi xa efumaneka.
Uphondo lweRhino lwenziwa ngantoni, kwaye kutheni lufuneka kangaka?
Uphondo lwe-Rhino alwenziwa ngeenwele ezixinyiweyo njengokuba kwakucingwa kodwa i-keratin (into efanayo eyenza izipikili, izihlunu kunye neentonga). Uphondo lufunwa emva kweenjongo zalo zonyango. E-Yemen uphondo lusetyenziselwa izibambane ezinobungqina oboniswe kubafana abancinci abafikelela ebudodeni.
Zeziphi iintlukwano phakathi kweeRhino amnyama namhlophe?
Akukho mahluko phakathi kohlobo lweentlobo ezimbini, negama le-White Rhino elivela kwingcaciso yomlomo wayo, wyd okanye ebanzi. Umlomo we-Black Rhino unobungozi ngokuchasene nomlomo omkhulu we-White Rhino. I-White Rhino izingela ukutya kunye ne-Black Rhino isisiphequluli, ngoko ke imilo yomlomo. Kukho ukwahlukana ngobukhulu kunye ne-White Rhino ibe yeyona inkulu kunazo zombini.